Apple waxa laga yaabaa inay dhawaan soo saarto iPad Air oo la hagaajiyay | IPhone News
Apple waxa laga yaabaa inay dhawaan soo saarto iPad Air la hagaajiyay
Tony Cortes | | iPad Air, dhowr
Jiilka afraad ee hadda iPad Air wuxuu iila muuqdaa tablet-ka ka saxsan oo dheeli tiran in Apple ay hadda haysato. Ilaa aad u baahan tahay shaashad weyn oo aad dooratid iPad Pro, iPad Air waa qiimaha ugu dheelitiran ee lacagta, iyo ku dhawaad ​​dhammaan astaamaha walaalkeed ka weyn. Waxaad horeyba u cabbiri doontaa sababta aad u rabto iPad Pro leh M1, la'aanteed macOS ...
waafaqsanaanta gudaha Apple qalin 2, naqshadeeda dibadda iyo astaamihiisa ayaa ka dhigaya mid mudan in wax yar laga bixiyo iPad-ka aasaasiga ah. Oo haddii Apple ay go'aansato inay cusboonaysiiso, cusbooneysiinta processor-ka, kamarada iyo shaashadda, waxay noqon doontaa caano, shaki la'aan.
Waxay u muuqataa inay tahay (iyo macquul ahaan, hubaal waxay ahaan doontaa) in Apple uu qorsheynayo inuu bilaabo a iPad Air dib loo cusboonaysiiyay. Waxay noqon doontaa jiilka shanaad ee moodelka dhexdhexaadka ah ee iPad-ka Apple, kaas oo ku xidhan iPad iyo iPad Pro.
Sida la daabacay Mac Otakara, Apple waxa ay qorshaynaysaa in ay dhawaan bilowdo dib u eegis ay ku samaynayso iPad Air-keeda hadda, kaas oo ilaalin doona muuqaalkiisa dibadda, wax ka bedelkuna waxa uu noqon doonaa oo kaliya qaybaha gudaha.
Warbixintani waxay sharraxaysaa in jiilka shanaad ee iPad Air uu ku rakibi doono processor-ka A15 Bionic, kamarad hore oo xagal baladhan ah 12 megapixels iyada oo taageero laga helayo masraxa Xarunta, 5G isku xidhka loogu talagalay moodooyinka LTE iyo Tooshka Dhabta ah Quad-LED.
Ma arki doonaa bisha Maarso?
Haddaynu taas ku xisaabtano dhaqan ahaan dhacdadii ugu horeysay Apple ee sanadka sida caadiga ah waa March ama ugu danbeyn April, waxa ay aad ugu badan tahay in Tim Cook iyo kooxdiisu ay noo soo bandhigi doonaa jiilka cusub ee hadda iPad Air in uu sheegay in keynote.
Haddii dhammaan wararka xanta ah ay run yihiin (kuwaas oo noqon kara, tan iyo iPad Air hadda la sii daayay Oktoobar 2020), iyo Apple waxay soo bandhigaysaa dhammaan isbeddelladan iyada oo aan la kordhin qiimaha, waxay shaki la'aan noqon doontaa iPad-ka ugu dheellitiran ee saddexda nooc, oo ku habboon dhammaan noocyada isticmaalayaasha, xitaa kuwa ugu baahida badan. Waxaan ku celinayaa su'aasha hordhaca ah: maxaad u rabtaa a iPad Pro oo leh processor-ka M1, haddii aadan ku tuujin karin macOS?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxa laga yaabaa inay dhawaan soo saarto iPad Air la hagaajiyay
Ricardo Adams P. dijo
Waxaan u maleynayaa in 11 ″ Ipad pro uu yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee USD $ 200 ee dheeraadka ah ee aad haysato, Chip M1, oo aan si ku filan loo isticmaalin, waa run, laakiin waxay leedahay awood weyn, labanlaab kaydinta, muraayadda dhaqdhaqaaqa, ka sii fiican. kamaradaha, nooca USB C oo leh taageerada Thunderbolt, dhawaaq wanaagsan, id waji iyo samaynta dib u eegis degdeg ah bogga, waxaan doortay 11 ″ pro markaan arkay in farqiga qiimaha si weyn loo caddeeyey.
Ku jawaab Ricardo Adasme P.
Abuurayaasha PUBG waxay dacweeyaan Apple iyo Google in aanay ka saarin Dabka Xorta ah bakhaaradooda
Qalabka dallacaadda ugu fiican ee ESR iyo Syncware ee iPhone kaaga